Khuraafaadyada iyo Xaqiiqooyinka ku saabsan pre-cum Ma uur qaadi kartaa? | Ragga Stylish
Qof walba waligiis waa maqlay precum ah. Waxaa jira khuraafaad badan oo ku saabsan dareerahan iyo awoodda haweeneyda uur ku yeelan karto. Marka la eego oraahda ah "ka hor intaan roobku di'in, biligley", waxaan soo bandhigeynaa qoraal aad ku baran karto wax kasta oo la xiriira precum. Laga soo bilaabo waxa ay tahay, ilaa inay ka dhigi karto haweeney uur leh, iyada oo loo marayo qaabkeeda iyo arrimaha muuqaalkeeda.
Ma rabtaa inaad wax ka barato precum oo aad ka nadiifiso dhammaan shakiga ku saabsan mawduucan jilicsan? Sii wad akhriska 🙂
1 Astaamaha precum
2 Waxqabadka precum
3 Fursada inaad uur yeelato
4 Goynta galmada
5 Shaki ku saabsan precum
Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa dheecaanka ka hor bixitaanka biyaha. Waa dareere dhalaalaya oo aan midab lahayn oo qarsoon awgood qanjidhada cowper (sidoo kale loo yaqaan bulbouretals) ee guska. Markaad galmo sameyneyso, dheecaankan badanaa waxaa laga soo saaraa marinka kaadi mareenka kahor intaan biyo baxu dhicin.
Waxaa jira dood ballaaran oo ku saabsan jiritaanka shahwada ku jirta dheecaan hordhac ah inay awood u leeyihiin inay haweeneyda uur qaadaan. Halabuurkiisu wuxuu lamid yahay kan shahwada, marka laga reebo in walxaha ka imanaya qanjirka 'prostate' iyo 'vesicles' aysan ku jirin.
Dheecaanku wuxuu ka baxayaa qanjidhada 'Cowper' wuxuuna si toos ah ugu dhacayaa marinka kaadi mareenka. Ma maro qanjir kale oo qarsoodi ah. Tani waxay preymiska ka dhigeysaa mid xawada ka baxsan. Kuwani waxay kaliya ka soo baxaan epididymis inta lagu jiro biyo-baxa, iyagoo ku qasmaya qeybaha kale ee dheecaanka shahwada.
Guud ahaan, precum-ka badanaa wuu ka yaryahay biya baxa laftiisa. Si kastaba ha noqotee, ma jiraan qadar cayiman. Waxa kale oo jira rag oo aan soo saarin dareerahan iyo kuwa kale oo qarsoon ilaa 5.
Waa inaan ogaano in jirkeena wax kadis ah wax walbana fulinayaan wax qabad. In kasta oo ay umuuqato mid aan faa iido lahayn, precum-ku wuxuu qabtaa dhowr shaqooyin
Midka koowaad waa in lagu dhaqmo sidii wax saliideeya galmada. Kaliya haweeneydu ma qarsoona xuubka si ficilka galmada uu u noqdo mid ka macaan oo sax ah. Ninka ayaa ceyrinaya dareerahan si uu u guto howsha saliidaynta derbiyada kaadi mareenka dumarka. Tani waxay fududeyneysaa cayrinta shahwada.
Shaqada labaad ayaa ah waxay baabi'isaa aashitada deegaanka xubinta taranka. Siilka wuxuu leeyahay pH aad aashito leh taas oo dhib ku ah shahwada inay noolaato. Sababtaas awgeed, dareerahan aysidhka ahi waa mid dhexdhexaad ah oo shahwadu way ka guuleysanaysaa "gaarista yoolka."
Fursada inaad uur yeelato
Haddii aysan jirin cabsi ah inuu uur yeesho markii dareerahan la saaray, wax dhibaato ah kama qabin tan. Muranka ku saabsan mawduucan ayaa ah wax daadad galiya lamaanayaasha ugu da'da yar bulshada. Waxaa jira daraasado fara badan oo ku saabsan cakiranka jiritaanka ama maqnaanshaha shahwada precum.
Daraasaduhu waxay u qaybsan yihiin kuwa sheegaya in shahwada dhaqaaqa laga helay dheecaanka ka hor biya baxa iyo kuwa aan sameynin. Labada daraasadoodba waxaa lagu sameeyaa cabirro qiyaas yar. Markii tijaabada lagu sameeyo cabbir yar, xogtaadu ma noqon karto mid dhameystiran. Si kale haddii loo dhigo, macluumaadka laga helay nidaamkan ma daboolayo dhammaan fursadaha ama ma falanqeynayo dhammaan doorsoomayaasha la tixgelinayo.
Waxaa la dhihi karaa suurtagalnimada uur qaadista precum waa wax aad uga hooseeya kan shahwada leh. Jidh ahaan ahaan, macquul maahan inay jirto manida nool ee dheecaanka maadaama aysan dhex marinin qanjirro qarsoodi ah. Si kastaba ha noqotee, haddii aad horey ujirtay shahwo hore iyo tii dhaweydba (sida xiriir kale oo galmo tanina waa tii labaad) ee lala yeesho gelitaanka aan la ilaalin shahwada qaar ayaa ku sii jiri karta kaadi mareenka biya baxa hore. Haddii tani dhacdo, waxaa suurtagal ah inay ku soo baxaan xamaasadda labaad ee precum.
Si aysan taasi u dhicin, kaadida inta udhaxeysa biyo baxa ayaa lagugula talinayaa si looga saaro shahwada haraaga ah. Sidoo kale, way wanaagsan tahay in la sugo dhowr saacadood si mar kale loo galmoodo.
Xitaa haddii la xaqiijiyo inay shahwo ku jirto dheecaanka ka hor biya baxa, suurtagalnimada inay haweeney uur yeelato aad ayey u yar tahay. Haddii ay jirto shahwo ahaan inay noqoto galmada labaad, waxay noqon doontaa tayo iyo tiro liidata. Horey ayey ugu adkaatay iyaga inay ka adkaadaan caqabadaha nidaamka taranka haweenka si ay u gaaraan ugxanta, qiyaasi in ka yar kala bar ciidanka ...
Cabsidaan uur qaadista precum darteed waxay la xiriirtaa saameynta guud ahaan loo yaqaan gadaal Qaabkan looga hortagayo adeegsiga cinjirka galmada wuxuu ka kooban yahay joojinta galmada iyo ka-qaadista xubinta taranka xubinta taranka dumarka ka hor inta aan la biyo bixin.
Tan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay hab ka hortag uur dabiici ah maadaama aysan u baahnayn wax daawo ah oo hormoon ah ama kondhom. Tani 100% laguma kalsoonaan karo ka hortagga uurka. Waxay ubaahantahay in ninku awood weyn ku yeesho biyo baxistiisa. Kalsoonida waxay ku saleysan tahay awooda ninka inuu guska uga saaro waqtiga ka hor inta uusan shahwadu soo bixin oo uusan ku xirneyn joogitaanka shahwada xuubka.
Laguma talin inaad isticmaasho farsamadan mooyee in lagu sameeyo maalmaha naagta aan bacrimin.
Shaki ku saabsan precum
Dad badan ayaa qaba shaki la xiriira cayrinta dheecaankan. Midka hore ayaa ah inuu HIV ku jiri karo dheecaanka ka-bixitaanka biyo-baxa. Jawaabta waa haa. Qaybaha fayraska waxaa laga helaa plasma seminal. Sidaa darteed, waxaa jiri kara halista in la isqaadsiiyo marka galmada la sameynayo.
Su'aal kale oo inta badan la isweydiiyo waxay ku saabsan tahay tirada shahwada ee xinjirowga. Weli lama oga hubaal inay manida ku jiraan iyo inkale. Hadday dhacdo inay jirto, waa saami yar marka loo eego kan shahwada. Xusuusnow inay jiri karto oo keliya haddii aad horay u biyo baxday.
Su'aasha ugu dhibta badan ee isticmaaleyaashu qabaan waxay ku saabsan tahay suurtagalnimada uur qaadashada dareerahan maalmaha bacriminta ee haweeneyda. In kasta oo la wada ogsoon yahay in shahwada ugu horreysa ee shahwada ama aysan jirin ama tiro yar oo labaad ah, waxaa lagugula talinayaa inaadan galmo aan ilaalin lahayn maalmahan. Sidan ayaan uga fogaaneynaa khataraha aan loo baahnayn.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aan ku cadeeyay shakigaaga ku saabsan mowduucan. Su'aal kasta oo aad qabtid, ku dhaaf faallooyinka iyaguna way ku caawin doonaan 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Khuraafaadka iyo xaqiiqooyinka ku saabsan precum
Waad salaaman tihiin. Waan aqrinayay qoraalka waxaanan jeclaan lahaa inaan ogaado meesha aad ka hesho macluumaadka si aan u ogaado inay tahay mid la aamini karo, su'aal kama keenayo, waa in la ogaado haddii aan ku kalsoonaan karo boggan iyo in kale